Xog dheeri ah iyo muuqaal aan farxad ka muuqan oo laga helay kullankii R/W Cabdi Weli, Madoobe iyo Maxamuud - Caasimada Online
Home Xul Xog dheeri ah iyo muuqaal aan farxad ka muuqan oo laga helay...
Xog dheeri ah iyo muuqaal aan farxad ka muuqan oo laga helay kullankii R/W Cabdi Weli, Madoobe iyo Maxamuud
Muqdisho (Caasimada Online)- Warar dheeri ah, ayaa laga helayaa kullan ra’iisal wasaaraha Soomaaliya, Cabdiweli Sheekh Axmed iyo hoggaamiyaha maamulka lixda gobal ee Koonfur Galbeed iyo ku xigeenkiisa, Madoobe Nuunow Maxamed iyo Maxammuud Sayid Aadan ku dhex maray Muqdisho.
Kulanka mas’uuliyiintan saxaafadda waa laga qariyay, sidda ka muuqda sawirka waa la isku khilaafka ugu yaraan qoddobada lagu soo qaatay, oo waxaaba Madoobe Nuunow ka muuqda in uu ka dhacay hadalka ra’iisal wasaaraha oo uu saluugsan yahay.
Madoobe Nuunow Maxamed iyo Maxammuud Sayid Aadan, toddobaadkii horre ayey soo gaarayn magaalada Muqdisho iyagoona ka yimid Baydhabo.
Dowladda Soomaaliya waa ay diiddan tahay in ay aqoonsadto maamulka lixda gobal ee looga dhawaay Baydhabo, waayo maamulkan wuxuu sheeganayaa lix gobal oo ay ku jiraan Jubbooyinka iyo Gedo, waxaana halkaas ka dhisan maamul kumeel gaar ah oo Jubba la dhaho.
Ilaa hadda shirkan dhex maray ra’iisal wasaaraha iyo madaxda maamulka lixda gobal ee koonfur galbeed ayaa saxaafadda loo soo bandhigin wax yaabaha looga hadlay.
Sidoo kale Madoobe Nuunow iyo Maxammuud Sayid Aadan waxa ay la kulmi doonaan guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Kulan seddax geesood ah oo dhex martay Raysal wasaaraha, Madoobe Nuunow iyo Maxammuud Sayid Aadan